ရမ်းသမ်းကွတ် – ကြက်သားဆီမပါကြော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရမ်းသမ်းကွတ် – ကြက်သားဆီမပါကြော်
ရမ်းသမ်းကွတ် – ကြက်သားဆီမပါကြော်
Posted by mashwetote on Apr 6, 2013 in Creative Writing, Entertainment, Food, Drink & Recipes | 30 comments
ငယ်ငယ်တုန်းက တီဗွီမှာလာတဲ့ Yan Can Cook ဆိုတဲ့ ဟင်းချက်အစီအစဉ်လေးကို မှတ်မိကြမလား မသိဘူး။
အခုကတော့ Yan Can Cook ရဲ့ နယူးဂျန်နရေးရှင်း၊ ရွှေတုတ်ရဲ့ ရမ်းသမ်းကွတ်ပေါ့နော်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကျောင်းပိတ်တော့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ကြက်သားကို ကြော်စားမလားလို့မေးတော့ အိမ်က ကျေးဇူးရှင်လေးက ဆီများများစားရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်လို့ ကြက်သားကို ဆီမပါပဲ ကြော်ကြည့်ပါလားတဲ့။
တစ်ခါမှတော့ မကြားဖူးပေမယ့် ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း သူစားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးခိုင်းပြီး ရမ်းသမ်းကွတ်ပါတော့တယ်။
အရင်ဆုံး ကြက်သားကို အတုံးသေးသေးတုံးပြီး ဆားနဲ့ ငရုပ်ကောင်းနဲ့ နယ်ပြီး ခဏနှပ်ထားတယ်။ (ဓားကိုင်တာ သိပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုတော့ ကြက်သားကို အရိုးထုတ်ပြီးသားပဲ ၀ယ်ပါတယ်။)
ပြီးတော့ ဆီမပါပဲကြော်ပါ ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းတင်ပြီးအိုးကပ်လိုက်တယ်။
မြည်းကြည့်တော့ အရသာရှိပေမယ့် ကြက်သားက ဖြူဖပ်ဖြူရော်နဲ့ နဲနဲမာချင်သလိုဖြစ်နေတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဘေးနားမှာ ဘာရှိလဲလို့ လိုက်ကြည့်တော့ တရုတ်ငံပြာရည်အနောက်ပုလင်းကို မျက်မှန်းတန်းမိသွားတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကြက်သားကို နဲနဲခွဲပြီး တစ်ချို့ကို ပဲငံပြာရည်အနောက်နဲ့နယ်ပြီး အိုးကပ်ကြည့်တော့ ပိုချိုပြီး ပိုလည်းနူးညံ့သွားတယ်။ ကြက်သားကင်လိုမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒါနဲ့ ချန်ထားတဲ့ ကြက်သားတုံးတွေကိုပါ ပဲငံပြာရည်နဲ့နယ်ပြီး ဆက်ချက်။
အဲ.. ချက်တယ်ဆိုတာကလည်း တစ်ဒယ်ချက်ပြီးရင် မြည်းကြည့်လိုက်၊ ပေါ့တယ်ထင်ရင် နောက်ချက်မယ့်အသားတွေကို ဆားနည်းနည်ထပ်ထည့်နယ်လိုက်၊ ငရုပ်ကောင်းအနံ့ သိပ်မထွက်လို့ဆိုပြီး ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ထပ်ထည့်လိုက်နဲ့ ကြက်သားအရသာက တစ်တုံး တစ်မျိုးပဲ။
ဒါပေမယ့် အားလုံးတော့ စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်။
ဒီပို့စ်က လုပ်ကြံရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ပစ္စည်းသက်သေ ဒါ့ပုံပါ တင်ပေးလိုက်တယ်။
လူသက်သေကတော့ ကောင်းလွန်းလို့ ဆွေမျိုးမေ့သွားပြီ။ ဘာမှမမှတ်မိတော့ဝူးတဲ့။
ကိုကိုအံ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ရင်လည်း
အဲ့လိုလေး ချက်ကျွေးရမယ်နော် …
ခုတောင် .. မျင်ဒါနဲ့ စားဂျင်တွားဒယ် ..
ဂလု .. ဂလု .. အု ..
မနှစ်ကတော့ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီး။ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် ချောချောလှလှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ ခုကျမှ လာပြီးမျက်နှာချိုပြန်သွေးနေတယ်။
ကျွေးဘူး။ ရွှေတုတ်တို့က အငြိုးခပ်ကြီးကြီးပဲ။ ငှင်း..ငှင်း…
ငါ့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုလည်း …
အိုကွယ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွယ် …
ကိုကိုအံ က ဂျစ်လို့ စဒါဘာကွယ် ..
အငြိုးတွေ ပြေစေပါတော့ကွယ် ..
အိုဘယ့် ဂျစ်ရဒဲ့ တုတ်လေးရယ် …..။
ဒါပေမယ့် စကားမပီတာကတော့ ခက်တယ်ရှင်။
ခုကျုပ်ကိုလာဖားနေတာလည်း ကျုပ်ကကတယ်ချောချောလှလှလေးဆိုတာသိသွားလို့ မဟုတ်လား။ မှန်တယ်ဆို ခေါင်းညိမ့်။
ဖြစ်လောက်တယ် တိုက်အောက်က သွားချောင်းတုံး အပေါ်ကနေပြီး
တစ်ညလုံး စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေသွန်ချလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်
ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်လည်း ထိုနည်းမဟုတ်သည့်တိုင် တခါတရံ
ချက်တယ်လို့ပဲခေါ်မလား။ ကင်တယ်လို့ကော ပြောလို့ရမလား။
ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် စားလို့ကတော့ တကယ်ကောင်းတယ် သိလား
ပြောရင်းနဲ့တောင် ပြန်ချက်စားချင်လာပြီ။ ရှလွတ်
ရမ်းသမ်းကွတ် အစီအစဉ်က ဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့တော့ မရပ်ရဘူးနော် မရွှေတုတ်ရေ။
နောက်ထပ်လည်း ဆက်လက် အမျိုးမျိုးတွေ တင်ပေးပါအုံး။
နည်း ၁၀၀ ပြည့်ရင် ရမ်းသမ်းကွတ် စားဖွယ်များ ဆိုပြီး စာအုပ်ထုတ်ပေးမယ်။
ဒီတစ်ခုနဲ့တော့ မရပ်ပါဘူး။ ဘယ်တော့ ကွတ် ကွတ် ရမ်းသမ်းပဲကွတ်နေရတာဆိုတော့ လာဦးမှာပါ။ နည်း ၁၀၀ ပြည့်မယ်တော့ အာမမခံနိုင်ဘူး။ နဲနဲဈေးလျှော့ပေးလေ :hee:
အဲ့ဒီကြက်သားနဲ့ ရွေတုတ်လက်ဖက်လေးနဲ့ တွဲစားချင်တာကွယ်… နောက်ထပ်နည်းသစ်လေးတွေ တင်ပေးနော် ခုတည်းက လေ့ကျင့်ထားမလို့ နော် နော် :harr:
နောက်ထပ်နည်းသစ်တွေအတွက် ကုန်ကြမ်းလေးတွေတော့ရှိတယ်။ အချောသတ်တာ မပြီးနိုင်တာနဲ့ပဲ တင်တာနှေးနေတာ။ နောက်ထပ်တင်ရင်လဲ အားပေးပါဦးနော်။
အမှန်အကန်များ ကွတ်လို့ကတော့…. :harr:
ဆွေမျိုးတင်မကပဲ ဂဇက်ရွာကလူတွေကိုပါ မေ့သွားမှစိုးလို့ အန်တီမရေ့…
မရွှေတုတ်ရေ … ရမ်းသမ်းကွပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် … မရမ်းမသမ်း ကွပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် … ဆီမပါပဲ ချက်လို့ ရတယ်ဆိုကတည်းက .. ဘယာကြော်ပါချင့် …. ။ ဆီမပါပဲ ချက်လို့ ရတဲ့ တခြား နည်းတွေလည်း လက်တို့ပါဦးနော့ … ။
ဆီစားတာက အသက်ငယ်တုန်းကတော့ သိပ်မသိသာဘူး အစ်မရေ … အသက်က တနှစ်ပြီး တနှစ်ကြီးလာတော့မှ .. လူက ပိုလေးလာတယ် … ပိုဝလာတယ် …နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေလည်းရှိတယ် ။ အဲ့ဒါတွေ မြင်လို့ တကယ်တမ်းလျော့မယ်ဆိုတော့ .. လျော့ရခက်သွားပြီ ။ ဆီစားတာ အကျင့်ပါလာတဲ့ ပါးစပ် တော်တော်နဲ့ ပြင်မရတော့ဘူးလေ … ။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာလည်း အဖွားက ဟင်းချက်လျှင် ဆီ အရမ်းသုံးပါတယ် ။ သူပဲ အိုးသူကြီး လုပ်ဟင်းချက်တာဆိုတော့ ဆီလျော့ထည့်ပြောလည်း သူလျော့ချင်မှ ဖြစ်တာလေ … ဆီပါလျှင် မချက်တတ်ပြန်ဘူး ။ ဒါနဲ့ပဲ … သူချက်တဲ့ ဟင်းဆီ သိပ်များလို့ မစားချင်ဘူးဆိုလျှင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အသီးရွက်တွေကို ရေလုံပြုတ်လုပ်စားရပါတော့တယ် ။
သူဆီလျှော့မထည့်လည်း ဆီစစ်ပြီးစားရင်နည်းနည်းသက်သာမလား… သိပ်တော့ မသိဘူး။ ပြောကြည့်တာ။ :hee:
ချက်နေကျဆိုတော့ ဆီမပါရင် မချက်တတ်တာလည်း ပါတာပေါ့။ ပြီးတော့ ဆီလျှော့ထည့်လို့ စားလို့မကောင်းတော့ရင် အဘွားရဲ့ ဟင်းကို အားမပေးကြမှာလည်း စိုးရိမ်လို့နေမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ရွှေတုတ်က ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း စားပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကတိယူပြီးမှ စိတ်ကြိုက်လက်တည့်စမ်းတာ
မအိတုံက မ၀ပါဘူး။ မြင်ဖူးတဲ့သူတွေက သိပ်လှတယ်ဆိုပဲ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် တစ်သိန်းရရင်ဘာကျွေးမှာလဲဟင်
practice makes perfect ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ
နောက်ပိုင်းရောက်လေ လက်မှန်လာတာကြောင့် အရသာ ပိုကောင်းလာလေလေ
ရမ်းသမ်းကွတ်များကို နတ်ပြည်အတွက် မှတ်သွားပါသဗျ။
နတ်ပြည်က နတ်သုတ်ဒါကို ရွှေတုတ်ရဲ့ ရမ်းသမ်းကွတ်နဲ့ အစားထို့မလို့လေလား…
နောက်တစ်ခါဆို ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းထားတဲ့ အရည် လေးနဲ့ စိမ်ထားပြီးမှ ကြော် (အဲလေ) အိုးကပ်ကင်ရင် လည်း စားကောင်းတယ်။
ဘယ်ဟုတ်ရမှာလဲအေ့ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ နယ် ကြာညို့ထဲမှာနာရီဝက်စိမ်ပြီးကြော်မှစားကောင်းတာ
ဆီမပါပဲ ကြော်တယ်ဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ဝေး
ဟင်းတမျိုးထဲကို အရသာ အမျိုးမျိုးထွက်အောင်ကြော်နိုင်တဲ့အတွက် ဂင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်အောင်ဆက် ကြိုး စားစေချင်ပါတယ်။ အရသာအမျိုးမျိုးရှိသော ကြက်ကြော်အား ရှု့ဒေါင့်အမျိုးမျိုးမှ ကြည့်ပီးစားသွားပါကြောင်း။
ဟင်းချက်တဲ့ ပိုစ့် က ကျုပ်နဲ့ လတ်တလော . .တော်တော့်ကို ပက်သက်မှု ရှိနေတယ်။ ကျုပ်ကတော့ ပြုတ်ပြီး တော့ လှိမ့်လိုက်တာပဲ . . ကာလာလိုချင်ရင် . . . သကြားနဲ့ ရောလှော်တယ်။
Mလုလင် က အခုမှအိမ်ထောင်ဦးစီးအစစ်ဖြစ်သွားကြောင်း ကပ်ကြွားတာ….
ဆီမပါပဲဆိုတော့ အိုးမကပ်အောင် မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်လေးနဲ့ ချက်ရရင်လဲ ရမယ်ထင်ရဲ့…။
ကြုံကြွား လေးပေါ့ . . ဦးပါ ရာ . .
အော်… ဂလိုကိုး။ ဘယ်လို ပတ်သက်မှုတွေ လဲလို့ စဉ်းစားနေတာ တကယ်တမ်းတော့ သူကကြေငြာဝင်တာကိုး။
ဒီပို့ စ်က လုပ်ကြံရေးထားတာလား အမှန်လား ဆိုတာကို
အပြင်မှာ အဲ့ပုံထဲက ကြက်ကြော် တစ်တုံး စားရမှ ယုံမယ်
အော် ကြက်ကို ကင်၊ပြုတ်၊ကြော်၊ဖုတ် စားတယ်လား။
မြွေဟောက်ဆိုတော့ အစိမ်းလိုက်ပဲ ၀ါးတယ်ထင်လို့။ ခွိ ခွိ
ရွာထဲမှာ ကိုယ့်ကို ရမ်းသမ်းပြီး ကွတ် တတ်တဲ့ အဖော်တွေ့လိုက်လို့ အတော်လေး အားတက်သွားပါကြောင်း။